Isihlomelo sangoku, esivulekileyo esinegumbi lokuhlambela kunye nekhitshi
Boars Hill, England, United Kingdom
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSarah
Isihlomelo sanamhlanje esizimeleyo esifumaneka ngokulula e-Abingdon, eOxford kunye ne-A34 ukuya eMilton Park. Isikhululo sebhasi singaphantsi kwe-100m kude neenkonzo eziqhelekileyo eziya eOxford nase-Abingdon
Ibekwe ngasemva kwikhaya losapho lwam kunye nokufikelela kwayo ngasese. Kukho indawo yokuhlala yangaphakathi nangaphandle ejonge igadi (ekwabelwana ngayo nosapho lwam) kunye namasimi. Ibhedi ephindwe kabini inokusongwa kude ukudala indawo eyongezelelweyo. I-Airbed yondwendwe lwe-3 iyafumaneka xa iceliwe. Ngaphandle kwendlela yokupaka imoto enye.
Isihlomelo sinendawo enkulu yokuhlala enebhedi ephindwe kabini, indawo yokuhlala kunye nekhitshi elincinci. Iingcango zeBifold zivula ngqo kwipatio. Kukho igumbi leshawari encinci ngaphakathi kwesihlomelo.
1 ibhedi elala abantu ababini, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Isetyenziswa nangabanye iyadi engasemva – Ayibiyelwanga yonke
4.85 · Izimvo eziyi-26
Ipropathi ingaphandle kwe-Abingdon ngokufikelela ngokulula kwi-Abingdon (iikhilomitha ezi-2) kunye ne-Oxford (iikhilomitha ezi-5.5).
Kukho ukuhamba okumnandi ukunqumla ibala elijongene nepropathi enokubandakanya ii-pubs zelizwe ezinkulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Sarah
I’m Sarah and I live in Abingdon with my husband and two young children. We love spending time outside
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Boars Hill